Tadalafil, lorcaserin, Sesamol, Cetilistat, Orlistat soo saaraha-CMOAPI
Alaabada tayada sare leh waa inay ahaato mid adag
Warshaddeenu waa GMP, cGMP
ISO ： 9001 ： 2008 ayaa la xaqiijiyay.
Waxaan bixinaa CMO & API one-stop service-
astaamaha: R&D, wax soo saarka, warshadaha-
ing iyo iibka.
CMO iyo API hal adeeg joojin
Isku darka macaamiisha iyo qandaraaska R&D
CMOAPI waxay bixin kartaa adeegyadan soo socda, kuwaas oo dhammaantood ay ku mideysan yihiin siyaasadahayaga adag ee ku saabsan ilaalinta Maskaxda Maskaxda (IP), in la hubiyo in mashaariicda loo maareeyo kalsoonida ugu adag mar kasta.
Soosaar yar-yar & baaxad weyn
Tobankii sano ee la soo dhaafay, CMOAPI waxay bixineysay isku-xirnaan heer sare ah iyo adeegyada wax soo saar. Heerka adeeggayagu wuxuu u dhexeeyaa min milligram yar-yar yar ilaa tan oo tan oo ah adeegyo warshadeyn baaxad weyn leh.
CMOAPI ee daahfurka daroogada waa daruur ku saleysan, xalka garashada oo falanqeysa aqoonta sayniska iyo xogta si loo muujiyo xiriiryo qarsoon iyo qarsoon oo gacan ka geysan kara kordhinta suurtagalnimada horumarka sayniska.
Geedi socodka R&D iyo horumarinta wadada cusub
Kooxdayada horumarinta kiimikada, waxay ka kooban yihiin in ka badan Xeelaha cilmiga 50 ee wadamadeena, waxay ka badan yihiin filashooyinka xitaa mashaariicda ugu adag. Ka shaqaynta shaybaarada gobolka ee casriga ah ee lagu qalabeeyay habka ugu dambeeyay iyo qalabka falanqaynta.
CMOAPI waa adeeg-bixiye dawooyinka Macaamiil Macaamiil iyo qandaraas ah R&D.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. oo la aasaasay 2007, waa shirkad ganacsi oo tikniyoolajiyad ah oo ku lug leh cilmi baarista, horumarinta iyo suuqgeynta alaabada ceyriinka ee dawooyinka.
Warshaddeenu waxay leedahay qalab lagu ogaanayo oo dhammaystiran, 60 nooc oo ah HPLC, 20 nooc oo ah chromatographs gaas ah, LCMS, ELSD, ultraviolet iyo qalabka muuqda ee muuqda, qaboojiyayaasha qalajisa iyo aaladaha kale ee horumarsan. Waxay ka gudubtay ISO14001, ISO9000 iyo shahaadada DMF iyada oo loo sii marayo mideynta iyo helitaanka, waxayna leedahay nidaam maarayn tayo guud ah.
Shirkaddeenu waxay shaqaaleysiisaa tiro khubaro ah oo sare oo leh taariikh cilmi baaris caalami ah, waxayna leedahay awood dhameystiran ee daraasadaha shaybaarka, tijaabada tijaabada iyo wax soosaarka warshadaha.
Shirkaddayada waxaa ku jira 11 dhakhaatiir ah iyo in kabadan 46 saynis, saynisyahano, iyo injineerro. Xarunta saldhiga wax soo saarka ee API wuxuu daboolayaa in kabadan 40 mu.The warshad dawada GMP waxay dabooshaa in kabadan 160mu waxayna leedahay aqoon isweydaarsi casri ah, sheybaar maamul iyo dhismayaasha ogaanshaha. , hool dhismeedka, meela qulqulaya, iyo inbadan.
“CMOAPI waa ISO 9001: 2008 la aqoonsan yahay dhammaan howlaheedii ganacsina ay si adag u hoggaansan yihiin heerarka maaraynta tayada caalamiga ah.”
DMF ayaa la xaqiijiyay